Semalt: Gịnị kpatara ọdịnaya ji dị mkpa maka SEO?
Ọdịnaya na SEO: Mmekọrịta
Ihe omuma nke okike
Imichọpụta Ihe E Kere Eke
Ndị na-ede akwụkwọ Semalt na-enye Injin Nchọpụta kachasị ọdịnaya nke na-echekwa
Ọdịnaya bụ eze.
Might nwere ike ịnụla nkebi ahịrịokwu a ọtụtụ oge, mana ị gbalịala ịchọpụta ihe mere ha ji kpọọ afọ ojuju eze.
Ọ bụ n'ihi na ọdịnaya nwere ikike ịkwalite ogo nke mkpokọta weebụsaịtị na SERPs (Search Ngini Ntinye peeji).
Ọ dị mma, ọ bụ naanị n'akụkụ dị mma. Ọ bụrụ na enwere ntụpọ na ọdịnaya ahụ, ọ nwere ike ịdọta ntaramahụhụ Google ma tufuo mkpokọta weebụ gị na otu.
Isiokwu a ga - enyere gị aka ịghọta ọdịnaya, SEO, gịnị kpatara ọdịnaya ji dị mkpa maka SEO, ihe ị ga - eme iji bulie ogo ọdịnaya, yana ọtụtụ ihe.
Akụkụ nke ikpeazụ gụnyekwara ihe ijuanya nke nwere ike inyere ọdịnaya gị aka karịa ndị asọmpi ma nwee ọkwa dị elu na nsonaazụ ọchụchọ.
Ka anyi bido.
Ọdịnaya bụ ozi ọ bụla nwere nzube ị na-enye ndị na-ege gị ntị site na iji ọwa. Ozi a nwere ike ịbụ ihe ọ bụla na ụdị ọ bụla.
Ọ nwere ike ịbụ ederede, onyonyo, vidiyo, GIF, webinar, vidio dị ndụ, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ na weebụsaịtị, ọwa mgbasa ozi, ngwa (web na mkpanaka), ma ọ bụ ebe ọ bụla.
Iji nweta nghọta ka mma, lee nkọwa nkọwapụta ndị a sitere na ihe karịrị ndị ọkachamara 40 na Azụmaahịa Dijitalụ.
SEO (Nchọpụta Nchọpụta Nchọpụta) bụ usoro iji bulie ogo na ọnụọgụ nke okporo ụzọ organic gị na ebe nrụọrụ weebụ na-enweta site na ngwa ọchụchọ.
Ọ bụrụ, dị ka onye nwe weebụsaịtị ọ bụla, ebumnuche gị bụkwa iji bulie weebụsaịtị gị n'ọkwá kachasị elu na SERPs (Search Ngini Ntinye peeji), SEO ga-enyere aka.
Taa, SEO tụgharịrị gburugburu Google. Ya mere, enwela mgbagwoju anya ma ọ bụrụ na mmadụ na-enye gị bulite weebụsaịtị gị dịka Google si kwuo.
Iji mụtakwuo banyere SEO, ụkpụrụ ọrụ ya, ụdị ya, na ihe ndị ọzọ dị mkpa, gafere akwụkwọ ntuziaka SEO a kwesịrị akwụkwọ maka ndị mbido site na Semalt.
Ebumnuche nke igwe nyocha ọ bụla bụ ịnye nsonaazụ bara uru ma bara uru ngwa ngwa o kwere mee. Ma olee otu ha si achọpụta ma nsonaazụ ya bara uru ma baa uru?
Ọ dị mma, enwere usoro algorithms iji chọpụta ma nsonaazụ nwere ike iduzi ndị ọrụ na ọdịnaya bara uru ma ọ bụ na ọ bụghị. Mgbe ngwa nchọta na-akwado na otu ọdịnaya nwere ike inye uru kachasị, ha na-ebute ya ụzọ.
Nchọpụta Ihe Nchọpụta Kachasị Ederede
Search engine kachasị ọdịnaya, ma ọ bụ ọdịnaya dị elu, bụ mpempe ihe nchọta ọchụchọ nke matara ga-enye ndị na-achọ ya uru. Ihe ọdịnaya kachasị kachasị dị ka injin inyocha ahụ bu ụzọ.
Ka e were ya na i bidoro ichicho ihe eji eme ihe d ị na Google. N’ime ihe na-erughị sekọnd, ndepụta ga-egosi na ihuenyo gị nwere nsonaazụ bara uru yana nke bara uru.
Nsonaazụ izizi dị na ndepụta a nwere ọtụtụ nchọta ihe nchọta kachasị.
Ngwa nke ihe inyocha igwe na-achọ ihe dị mma
Nchọpụta na njikarịcha nke ihe dị iche iche nke ọdịnaya na-ekpebi ma ọ ga-enwe ọkwa dị elu na nsonaazụ ọchụchọ ma ọ bụ na ọ gaghị.
Ndị a bụ ihe ndị kachasị mkpa dị na ihe nchọta ọ bụla kachasị:
Mgbe ị na-elekọta ihe ndị a, usoro ọchụchọ ga-achọpụta ọdịnaya gị dị ka ihe bara uru ma buru ụzọ mee ya. Ka anyị ghọta ha otu otu.
Ozi bu eziokwu banyere mmadu ma obu ihe ichoro inye ndi na ege gi nti. O nwere ike ịbụ n’ụdị nkọwa, ọgụgụ, ntuziaka, ndụmọdụ, ntuzi aka, ma ọ bụ ihe ọ bụla ịchọrọ inye.
Gbaa mbọ hụ na ozi ị na-enye bụ ihe ziri ezi ma ghara iduhie ndị na-ege gị ntị.
Ebumnuche bụ ihe kpatara izipu ozi a. Ọ nwere ike ịbụ ikuzi, ịkọ ozi, ime ka onwe gị ama, iwebata azụmaahịa gị, ma ọ bụ ihe ọ bụla. Nzube gụnyere ihe ị tụrụ anya ya mgbe ị nyechara ndị na-ege ntị ozi ahụ.
Gbaa mbọ hụ na ị chepụta ozi ahụ n'ụzọ ọ ga - ejikọ ndị na - ege ntị ma mezuo ebumnuche gị.
3. Ndị na-ege ntị
Ntị bụ onye a tụrụ anya ka ọ bụ ndị mmadụ ịchọrọ inweta ozi ahụ. Izubere ndị na-ege ntị nke ọma ga-enyere gị aka ịtọ ihe dịka nkọwa, ụda, na ọdịdị ozi ịchọrọ ịnye.
Ghọta ndị na-ege gị ntị, mkpa ha, nsogbu ndị ha na-eche ihu, na ajụjụ ha nwere ike ịjụ mgbe ị nwetasịrị ozi. Nọrọ ọdịnaya gị nke dị n'etiti ndị na-ege gị ntị, ọ bụghị ihe ọzọ.
Isdị bụ anya ikpeazụ nke ozi a mgbe ị na-ewetara ya ndị na-ege gị ntị. Chọpụta otu ndị na-ege gị ntị ga-esi ghọta ya nke ọma - n'ụdị ederede, oyiyi, ma ọ bụ vidiyo.
Nke mbu, kpebie ụdị nke ọdịnaya gị - ihe ọmụma, mmetụta uche, njọ, ma ọ bụ ihe ọchị. Họrọ otu i choro isi gosi ya.
Ọwa bụ ebe ozi gị si erute ndị na-ege ntị. Ọ nwere ike ịbụ weebụsaịtị, blog, igwe mgbasa ozi, ngwa ekwentị, telivishọn, akwụkwọ akụkọ, ma ọ bụ ihe ọ bụla nwere ike ịkacha ka gị na ndị na-ege gị na-ege ntị lebara anya.
Gbaa mbọ hụ na ọdịnaya gị dị na ọwa ebe ndị na-ege gị ntị lekwasịrị anya na-etinye oge kachasị.
Ọdịnaya kachasị dị mkpa n'ihi na ọ ga - enyere weebụsaịtị gị aka elu na ibe nsonaazụ ọchụchọ. Ọ ga - eme ka ịhụ ọhụụ gị dị na ịntanetị.
Ka ị na -emepụta ọdịnaya kachasị, lezienụ anya na ọ dị n'etiti mkpa nke ndị na-ege gị ntị, ma na-elekọta ọdịnaya niile nke injin inyocha na-arụ ọrụ nke ọma.
Ọzọkwa, ịkwesịrị ịtụle ọtụtụ ọrụaka dịka isi okwu, URL, nkọwa meta, aha meta na ndị ọzọ.
O nwere ihe ole na ole onye obula kwesiri iso. Ha bụ:
1. Nnyocha Isi
Nchọpụta isiokwu bụ ihe mbụ ị ga - eme maka na ọ bụ naanị ezigbo isiokwu dị mkpa na - ejide n'aka na achọpụtara ọdịnaya gị site na nsonaazụ ọchụchọ.
Ka ị na-eme nyocha, gbalịanụ izere igodo ndị dị oke asọ ma họrọ akara aka ogologo. Nwekwara ike ị nweta enyemaka nke ngwa ọrụ nyocha isiokwu dị mma, dị ka Keyword Planner si Google.
2. Mezue isiokwu
Mgbe ịhọrọchara mkpụrụokwu ziri ezi, ịkwesịrị mezue isiokwu nke ọdịnaya gị. Maka ọkwa dị elu, ọ dị mkpa ijikọ isiokwu ahụ na isiokwu gị. N’aka ozo, isiokwu gi kwesiri ibu isi okwu.
3. Mepụta Ihe ndep uta
Ugbu a, ịkwesịrị ịmepụta ndepụta nke ihe ọdịnaya gị niile ga-ebu. Kpebie isiokwu, mkpụrụ edemede ole dị na ya, anya, na mgbe mkpụrụokwu ole gafere.
4. Mee ya Ike Ka M Buru
Mee ka ọgụgụ gị dị mfe ọgụgụ site na ịkpụ ya na obere ahịrịokwu nke 1-2 ahịrịokwu. Tinye ihe nlere anya / isi okwu n’abiala okwu 150-250 ọ bụla.
Ndị na-agụ ya na-etinye obere oge na websaịtị. Ọ bụrụ na ha ahụghị ihe na-atọ ụtọ ịrapara, ha ga-apụ.
5. Ewepụla isi Okwu
Mgbe ị na-ekepụta ọdịnaya ahụ, rapara n’okwu ahụ. Ọ baghị uru itinye ihe niile n'otu ọdịnaya. Gbado anya na isiokwu ma nwaa ime ka ọ baa uru.
6. Stick to Target Isiokwu
Ihe di n’ime gi kwesiri ibu isi okwu. Y’oburu na ichoro ka ihe gi buru uzo buru uzo, rapara na isi okwu gi.
7. Tinye njikọ
Ngwa enyocha na-amata na ọdịnaya gị nwere ntụkwasị obi mgbe ọ nwere njikọ nke weebụsaịtị, ndị a pụrụ ịdabere na, na ikike. Gbalịa hụ na okwu ndị ị na-eme iji mepụta njikọ jikọtara na saịtị a na-eduzi.
Dịka ọmụmaatụ, lee njikọ n'okpuru ebe a nwere isiokwu 'ntuziaka SEO maka ndị mbido.' Mgbe ị pịa njikọ a, ọ ga-ebugharị gaa na weebụsaịtị Semalt, ebe ị ga-ahụ otu ihe ahụ akpọtụrụ na njikọ a.
N’atu anya ihe okike putara na I na abanye n’uzu oyuzu oke nke ihe di n’ime.
Ọ gụnyere njikarịcha ihe ndị a:
Ka anyị ghọta ha otu otu:
Ihe owuwu URL nke webpage bu ihe mbu ndi oru achoputara. Ọ bụrụ na URL gị enweghị isiokwu dị mkpa, ohere nwere ike ọ gaghị aga na saịtị gị.
URL dị omimi na ogologo oge na-atụkarị ndị ọrụ ọchụchọ, ha na-egbu oge ịpị njikọ ahụ. Ghọta usoro njikọ atọ a akpọrọ n'okpuru:
https://semalt.com/fullseo - Ndị ọrụ ghọtara ozugbo na njikọ a ga-emegharị ha gaa na ibe weebụsaịtị Semalt nke nwere ozi banyere FullSEO. Ha agaghị ala azụ pịa ya.
https://www.nytimes.com/2008/06/27/technology/27google.html?_r=3&adxnnl=1&oref=slogin - Ndị ọrụ nwere ike ọgaghị adị 100% mana ha nwere ike iche na ịpị ya nwere ike ibuga ha na websaịtị nwere ozi metụtara SEO.
http://www.baystreet.ca/viewarticle.aspx?id=588707 - Ndị ọrụ aghọtaghị ihe njikọ a bụ. Yabụ, ha na-ala azụ pịa ya.
Mkpado ntanetị bu isi okwu (pịa) ka ị na-ahụ na nsonaazụ ọchụchọ. Ha na - enyere Google aka, na ihe ndị ọzọ na - achọ ọchụchọ, ịghọta ọdịnaya gị.
Mkpado aha ntanetị bụkwa ihe na-ekpebi mgbe ndị ọrụ ga-ahọrọ nsonaazụ ọchụchọ kachasị mkpa. Tụlee ihe anọ ndị a dị mkpa mgbe ị na-ebuli akara aha aha:
Gwa ya hoo haa ka ị na-emepụta mkpado aha.
Ejikwala otutu mkpado aha aha.
Gbaa mbọ hụ na ọ gafere mkpụrụ edemede 60.
Etu isi okwu kwesiri ịdị na mbido.
Obere ederede ederede ị hụrụ n'okpuru mkpado isiokwu / isiokwu ga-edobe na URL ka a na-akpọ nkọwa nke Meta.
Nkọwa nkọwa meta na nke isi ihe nwere ebumnuche gbara agba na-adọtakwu uzo. Tụlee ihe atọ a dị mkpa ka ị na-achọ ịkọwa meta:
Gbaa mbọ hụ na ederede ederede erughị mkpụrụ edemede 160.
Mee nkenke ederede dị nkenke na nkọwapụta nke ọdịnaya ahụ.
Tinye isi okwu na akara dị mkpa.
Edemede a kọwara ihe mere ọdịnaya ji dị mkpa maka SEO yana ihe niile ị ga - eme iji mepụta ọdịnaya nyocha kachasị mma.
Gịnị ma ọ bụrụ na ndị odeakwụkwọ na ndị odeakwụkwọ maara ihe niile emee?
Ndị odee akwụkwọ na Semalt bụghị naanị na-elekọta ọdịnaya gị kamakwa jide n'aka na ọ kachasị ndepụta nsonaazụ ọchụchọ Google ma mepụta mmasị onye ọrụ.
Gịnị kpatara Semalt?
Azụmaahịa ọ bụla ma ọ bụ onye nwe ebe nrụọrụ weebụ chọrọ ọdịnaya maka ibe weebụ, post blog, nyiwe mgbasa ozi na-elekọta mmadụ, otu esi aga-eduzi ya, yana ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ha goro ọde akwụkwọ zuru ezu, ọ nwere ike ha agaghị etinye ego na mmefu ego ha. Na, onye nweere onwe ya nwere ike iwe ezigbo oge iji mepụta ọdịnaya.
Ọ na - akpata ọgba aghara na uche nke ọtụtụ ndị na - azụ ahịa ma ọ bụ ndị nwe ebe nrụọrụ weebụ, na ha anaghị aghọta ihe ha ga - eme.
Ọ dị mma, ọ bụghị ọnọdụ iji gha agbagha ma chee echiche banyere azịza / Semalt. Ndị ọkachamara na - ede ihe na Semalt na-ahụ na ejiri nlekọta ọdịnaya gị niile lebara anya nke ọma.
Mgbe ụfọdụ, mgbe ị na-elele ọdịnaya ahụ, ndị mmadụ na-eme obere mmejọ na-emetụta ogo ogo ha nke weebụsaịtị. Iji zere ahụmịhe ndị dị otú a, ịkwesịrị ịde ndị odeakwụkwọ Semalt ọkachamara.
Semalt + Ọdịnaya dị elu = You ga-aba ọgaranya.